kulan looga hadlayay Amaanka Gobalka shabeellaha dhexe oo ka dhacay Degaanka Dacaar – Radio Muqdisho
kulan looga hadlayay Amaanka Gobalka shabeellaha dhexe oo ka dhacay Degaanka Dacaar
Gudoomiyaha gobalka shabeellaha dhexe Axmed Meeyre Makaraan iyo saraakiil ka tirsan dowlad gobaleedka hirshabeelle iyo meleteriga dawladda federaalka soomaaliya ayaa habeennimaddii xalay kulan looga hadlaay dhinaca Amniga kula yeeshay qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool tuuladda Dacaar oo ka mida tuulooyinka hoostaga degmada warsheekh ee gobalka shabeellaha dhexe.
Kulan kaaniaya ahaa mid lagu lafa gurayay siddii layskaga kaashan lahaa ladagaalanka argigixisadda iyo kooxo burcada ah oo ku soo badanaayo waddooyinka Gobalka qaar.
Kulank markuu soo idlaaday aya waxaa ugu horeyn goobta ka hadlay qaar ka mida bulshada tuulada Dacaar oo ka hadlay baahiyaha ay qabaan iyaga oo sheegay waxkaste inu ugu horeeya Amaanka.
Waxa iyana dhan kooda kulanka ka hadlay Korneel Cabd qaadir Nuur Xasan iyo Gudoomiyaha degmada Warsheekh Axmed Xuseen Axmed waxeyna ka codsadeen Shacabka ku nool deegaanada uu hawgalka ka socdo in ay xiriir wadashaqeeyn ah la yeshaan Ciidamada.
Gudoomiyaha gobalka Shabeelaha Axmed Meeyre Makaraan oo Hadal jeedintii Madasha soo xiray ayaa shacbka Gobalka ugu bishareyay in wax laga qaban doono baahyahooda inta uu ka awooda Maamulka Gobalka.
Gudoomiyaha gobalka Shabeelaha Dhexe Axmed Meeyre Makaraan ayaa hawlgallo uu hogaaminaayo iyo kulamo is barbar socday ka waday toddobaadki aynu soo dhaafnay dhowr tuulo oo hoostaga Degaanada Cadale, Warsheekh iyo Raaga Ceelle oo dhamaantood katisan Gobalka Shbeelaha Dhexe
Mudanayaasha Golaha shacabka oo Akhrinti labaad mariyay Miisaaniyada Dowladda ee 2018